पीडित प्रचण्ड! – |Radio Burtiwan| burtibang khabar
६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४ March 20, 2019 manak	0 Comments
प्रचण्ड अहिले अमेरिकामा छन्। आफ्नी बिरामी पत्नी सिता दाहालको उपचारार्थ अमेरिका आएका प्रचण्डको अमेरिका आगमनलाई यहाँका केही नेपालीहरूले आफ्नो मनको पिडा र आक्रोश पोख्ने अवसरको रूपमा लिएको देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा राखिएका ‘स्ट्याटस’ र सँगै जोडिएका तस्बिरहरूले प्रचण्डलाई एक युद्ध अपराधीको रूपमा देखाइएको छ।
सिउँदो लुटिएकी युवती, टुहुरो बनाइएका नेपाली बाबु-नानीहरू, काख रित्तो बनाइएकी आमाहरूले मात्र राम्ररी बुझेका छन् – नेपालको युद्धको पिडा। प्रचण्डको अचानोको प्रहार ती अबोधहरुमाथीहरु परेको थियो राज्यका नाममा या माओवादीका नाममा।
तर, ‘आई फर एन आई’ सिद्धान्तले अभिप्रेरित हामी केहीलाई सायद मानवीय समवेदनाले छुँदैन। प्रतिशोधको ज्वालामा रन्किएका हामी केहीलाई सायद अरूको पिडा भन्दा पनि आफ्नो पिडा महत्त्वपूर्ण लाग्छ। अर्काको पिडा थोरै पनि आफूले महसुस गरे सायद दुनियाँको झगडा एक मिनेटमा सकिन्थ्यो होला।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो मनको पिडा ओकेलेर आखिर के नै पाइन्छ र ? क्षणभरको मन शान्ति बाहेक। सत्य परिवर्तन हुँदैन हाम्रा दुई-चार अशिष्ट ब्याबहारले। पर्दा पछाडि बसेर धारे हात लाउन जति सजिलो छ त्यति नै असजिलो छ ‘फिल्ड’ मा गएर सुधारमुखी काम गर्न। यथार्थ बदल्न इतिहास लेख्नु पर्छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिने ‘क्षण-भंगुर’ दुई- चार लाइनले विचार होइन, हाम्रो मनोदशा देखाऊछ।
‘चिप पपुलारिटी’का लागी नाङ्गो नाच काफी छ। मार्केटमा बिक्ने दुई-चार अशिष्ट शब्दहरू राखेर गरिएको विरोधले सायद कुनै असन्तुष्ट पक्षको आत्मा सन्तुष्ट गरेको हुनु पर्छ
त्यही भएर होला, प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणको औचित्य सँग सत्प्रतिसत जानकार हुँदा हुँदै पनि गालीगलोजमा उत्रन छोडेनौ। रोगी श्रीमतीको उपचारमा लागेका प्रचण्डमा हामीले एक निरीह पति देखेनौ। हामीले केवल तत्कालीन माओवादी ‘आतंकारी’ का नाइके प्रचण्डलाई देख्यौ। सायद दोष हाम्रो नजरको हो।
विरोधको पनि एक अनुशासन हुन्छ। एक विधि हुन्छ। हामीले छोडेको मुलुक नेपालको एक ‘सर्वोच्च नेता’, जो प्रधामन्त्री समेत भैसकेको छ, उसको विरोधमा ‘जनयुद्ध’कालीन कालो इतिहास लेखेर हामीले कतै आफ्नै मानसिकता त नाङ्गो पारिरहेका छैनौ ? पूर्वाग्रहले छोपिएका नजरले देखिने दृश्यहरूमा दोष दृश्यको होइन , निश्चितरुपमा दृश्यकको छ।
आफ्नो ‘इलाका’मा त भुस्याहा कुकुरहरू पनि आफूलाई शक्तिमान ठान्छन् क्यार। त्यही भएर होला उनीहरूको भुकाइमा चर्कोपन सुनिन्छ। सिंहले त आफ्नो सिकार मिर्गहरुको इलाकामा उनीहरू कै झुन्ड बिच गएर गर्छ।
कसैलाई लाग्ला, लेखक त प्रचण्डको भक्त रहेछ। गलत।
प्रचण्डको ‘क्रान्ति’ का कारण, अप्रत्यक्ष रूपमा, पिता गुमाउने एक पुत्र हुँ म। रेडियो नेपालमा एकै दिन र एकै पटक नितुक्ती पत्र लिएका डेकेन्द्र थापा जस्ता पत्रकार गुमाउने एक अभागी मित्र हुँ म। राष्ट्रिय समाचार समितिमा कार्यरत हुँदा तत्कालीन पृतनापति रुपाङ्गत कटुवाल सँग सेनाको हेलिकप्टर चढेर सेनाले दुर्गम गाउँमा गर्ने स्वास्थ्य शिविरका बारेमा समाचार लेख्दा स्थानीय जनसरकारको चिठी प्राप्त गर्ने पत्रकार हुँ म। राज्य र मावोबादीका कारण ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकका टुहुरा-टुहुरीहरूलाई गास, बास र कपासका लागी पश्चिम नेपालको नेपालगन्जमा खोलिएको ‘सहारा बाल गृह’ सञ्चालन गर्ने क्रममा अमेरिकन दूतावासको सहयोग लिएपछि ‘अमेरिकन स्पाई’ को आरोप लागेको एक स्वयंसेवी हुँ म।
← शनिबार रक डेलमा होली महोत्सव
बोइङ ७३७ उडान स्थगन गर्न ट्रम्पको आदेश →
निसिखोलाका कृषकहरुलाई व्यवसायिक बाख्रापालन सम्बन्धि भेटिनरी तालिम आज देखि सुरु ।। ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४
नगरप्रमूख नेपाली सहितको टोलीद्धारा बुर्तिबाङका ३ ओटै परिक्षा केन्द्रको अनुगमन । ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४
अर्गानिक खेती प्रणालीले साह परिवार माडीकै नमुना किसान ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४
गुञ्जा राय, “कालो दिवस”को समाचार शेयर गरेपछि जागिर चट, के भन्छिन् उनी ? ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४
पानीजहाज आउँदैछ, बबण्डर गर्नेबेला भएको छैनः देवेन्द्र पौडेल ६ चैत्र २०७५, बुधबार ०६:३४